"Mitady zavatra lehibe ho anao va ianao? aza mitady izany! Jeremia 45:5 Izay ilain’i Jehovah aminao, dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindrampo ary ny hanaraka an’Andriamanitrao amin’ny fanetren-tena. Mika 6:8 Anaka, atolory ahy ny fonao." Ohabolana 23:26
Ity vehivavy mpino iray efa zokiolona, izay nahatoky hatrany tamin’ny fanompoana ny Tompo, dia mandamaka eo am-pandriana ankehitriny, azon’ny kohaka tsy mety afaka. Tony izy, nanazava tamina mpamangy iray: «Hitanao, fony mbola tanora aho, dia hoy ny Tompo tamiko: Betty a, ataovy ity; Betty a, ataovy iry;. Ary dia niezaka aho nanao izany araka izay tratrako. Ankehitriny indray, dia hoy Izy amiko: Betty a, mijanòna eo am-pandriana miaraka amin’ny kohakao…»
Ny zava-dehibe ho an’ity kristiana ity, dia tsy ny mahavita zavatra misongadina, fa ny manao fotsiny ihany izay asain’ny Tompo ataony.
Izany toe-po izany dia mampahatsiaro ny an’ny apostoly Paoly, izay nanoratra fony izy tany an-tranomaizina, hoe: “Izaho efa nianatra tsy hierina na manao ahoana na manao ahoana. Mahalala hietry aho, ary mahalala hitombo; na aiza na aiza, ary na amin’inona na amin’inona, dia efa nampianarina ny ho voky sy ho noana aho ary hanam-be sy halahelo. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin’Ilay mampahery ahy" (Filipiana 4:11-13).
Amin’ny Tompo, ny fahatoniana sy ny fanekena Azy am-pahatokiana, rehefa miaina izay tiany holalovantsika isika, dia mitovy lanja amin’ny asa mamokatra. Ny tadiaviny aloha dia ny hanana ny toerana voalohany ao am-pontsika. Mba tiany ny hianarantsika hahafantatra Azy toy Ilay “tena sakaiza tokoa [izay] tia amin’ny andro rehetra” (Ohabolana 17:17) sy miombona tanteraka amin’ireo fahoriantsika.